Saafi Films - News: Kulan loga tashanayo ayaha Gobolada Jubboyinka iyo Gedo oo ka dhacay Doolow iyo Masuliyiin culus oo ka qayb galay.&#8207;
Kulan loga tashanayo ayaha Gobolada Jubboyinka iyo Gedo oo ka dhacay Doolow iyo Masuliyiin culus oo ka qayb galay.&#8207;
Waaxaa Magaalada Doolow ee Gobolka Gedo ka dhacay kulan muhiim ah oo ay ka soo qayb galeen Masuuliyinta Ahlusunna iyo Saraakisha Dowlada ee Gobolada Jubboyinka iyo Gedo Maamulka Dagmoyinka Gobolka Gedo Odayaasha dhaqanka Gedo .
Kulankaan ayaa waxaa loga tashanayay Isbadaladi ugu danbeyay ee ka dhacay Gobolada Juboyinka iyo Gedo waxaana diirada lagu saaray sidi lo sii xojin laha Howlgalada Al-Shabaab loga sifeynaayo inta ay ka jogaan Gobolada Jubboyinka iyo Gedo.
Kulankaan ayaa waxaa Abaabulkiisa Laha labo ka mid ah Saxiixeyaasha qorshaha Nabad iyo Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo oo kala ah Sh Maxamed Maxamuud Yusuf Aw-libaax iyo Gen Cabdilahi Sh.Ismaciil Fartaag waxaa sido kale kulankaan abaabulkiisa qayb libaax kulana Ex Xildhibaan Maxamuud Sayid Adan.
Kulankaan ayaa waxaa si toos ah uga qayb qadanayay Gudomiyeyaasha 5 Dagmo ee Gobolka Gedo ay Dowlada ka maamusho sida Doolow,Luuq, Balad xaawo,Garbaharey,Ceelwaaq, waxaa sido kale ka qayb qadanayay Odayaasha dhaqanka Dagyoyinkaas kuwooda ugu misaanka Culus.
Shirkaan ayaa waxa sido marti ku ahaa Saraakil Itobiyaan ah oo uu ka mid yahay Gen Ciidamada Itobiya u qabilsan Somalia iyo Saraakil kale.
Ugu horeyn Shirkaan ayaa waxaa diirada lagu saray sid dag dag logu xoreyn laha deeganada ay hada Al-shabaab uga sugan yihiin Gobolka Gedo iyo Jubbada Dhexe waxaana la isku waafaqay in maalmaha soo socda la qaado howlgal cir iyo dhul ah oo lagu xoreynaayo deeganada hada ku haray gacanta al-shabaab.
Qodobka labaad ee Shirka loga hadlay ayaa waxaa uu aha sidi Maamul dag dag ah logu sameyn laha Gobolka Gedo kadib marki ay gacanta so galaan Dagmoyinka Baardheere iyo Buurdhuubo si gobolka uu ula janqaado Gobolada kale ee Dalka.
Qodobka 3xaad ee Kulanka ayaa waxaa uu ahaa in Gobolada Jubboyinka iyo Gedo ay helaan Maamul Goboleed xirir fican la leh Dowlada Fadaraalka ah ee Somalia iyo Dowladaha Dariska kuna yimaada Rabitaanka Shacabka Wada daga Gobolada Jubboyinka iyo Gedo.
Qodobka 4 aad ee Siyaasiyiintan misanka Culus ku leh Gobolada Konfur Galbeed Somalia ee kulankaasi ka qayb qadanayay ay isla afgarteen ayaa waxaa uu ahaa in Howlgalada cirka iyo dhulka ah ee lagu qaadaayo goobaha ay Al-shabaab ku dhimantahay ee Jubboyinka iyo Gedo ay noqdaan kuwa by I Want This"aan waxyeelo ka soo gariin Shacabka ku nool deeganadaasi.
Kulankaan inta uu socday Masuliyinti ka qayb galaysay waxay si wada jir ah Hambaliyo ugu direen Madaxweynaha Cusub ee Somalia waxaayna ugu baqeen in uu R/wasaaraha Somalia u soo Magacaabo Shaqsi ka soo jeeda Gobolada Konfurta iyo Bartamaha Somalia .
Ugu danbeyn waxaa kulanki xasaasiga aha ee ka dhacay Doolow ka hadlay Odayasha dhaqanka Gobolka Gedo waxaayna ugu baqeen Siyaasiyiinta Gobolada Jubboyinka iyo Gedo ee kulankaasi ka qayb qadanayay in ay ka shaqeyaan isku furka Gobolada Jubboyinka iyo Gedo iyo sidi lo wanajin laha Xirirka ka dhexeeya dadka walalaha ah ee ku wada nool 3 daas gobol ayado ugu danbeyn kulanki xasaasiga aha lagu soo xiray duco.
4,519,166 unique visits